Dacwada Somaliya ee dhismaha Saldhiga Imaaraatiga ee Berbera • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dacwada Somaliya ee dhismaha Saldhiga Imaaraatiga ee Berbera
Dacwada Somaliya ee dhismaha Saldhiga Imaaraatiga ee Berbera
March 28, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Dowlada Soomaaliya ayaa Salaasadii shalay si rasmi ah golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ugu gudbisay dacwad ka dhan ah dowlada Imaaraatiga oo sheegtay inuu saldhig militari ka dhisanayo magaalada Berbera ee Somaliland.
Qoraalka Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Amb. Abukar Osman uu u gudbiyey Golaha Amaanka ayaa lagu sheegay in dowlada Soomaaliya aysan marnaba ogolaan doonin in lagu soo xad gudbo Madax-banaanideeda, isla markaana ay qaadi doonto talaabo walba oo la gudboon.
Heshiiska dhexmaray Somaliland iyo Imaaraatiga ayaa lagu sheegay in dowlada UAE ay sidoo kale tababar u fidin doonto ciidamada booliiska iyo militariga ee Somaliland. Dhismaha saldhiga Militari ee Berbera ayaa lagu sheegay mid sharci daro ah maadaama Somaliland aan caalamka aqoonsaneyn.
Imaaraatiga oo dhaq dhaqaaq ganacsi iyo militari ka wada Badda Cas ayaa saldhigyo militari horey uga soo sameystay wadanka Yemen oo ay xiligan ka socdaan dagaalo xoogleh.
Shirkada laga leeyahay Imaaraatiga DP World ayaa iyaduna sheegtay inay maalgelin doonto dekedda Berbera heshiiskaasi oo ay qeyb ka tahay dowlada Itoobiya oo laga siiyey 19% maalgashiga Dekedda Berbera, arrintaasi oo iyaduna abuurtay xiisad weyn.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyey go’aan dalka Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland looga mamnuucyo inay ka hawlgasho shirkada DP World.
Dowlada Imaaraatiga ayaa horey u sheegtay inay illaalineyso midnimada iyo Madax banaanida dalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga jawaabin dacwada Somaliya u gudbisay Qaramada Midoobay ee ku aadan saldhiga militari ee Berbera.
Saldhigan Militari ayaa waxaa sidoo kale shaki ka muujiyey dowlada Itoobiya oo iyadu hada sheegatay inay maalgashan doonto 19% dekedda Berbera, balse dhinaca kale shaki ka qabta saldhiga Militariga Imaaraatiga doonayaan inay Berbera ka sameystaan.
Itoobiya oo sanadkan kamid ah dalalka xubnaha ka ah Golaha Amaanka ayaa si gaar ah isha ugu heysa isbaheysiga militari ee Imaaraatiga la leeyahay dowlada Masar oo ay isku hayaan wabiga Nile ayaa ka cabsi qabta khatar militari oo uga imaan karta saldhiga Berbera oo horey loo sheegay in dowlada Masar laga yaabo inay iyaduna keensato ciidamo maadaama ay kamid tahay xulafada Imaaraatiga iyo Sacuudiga.
Maalgashiga Itoobiya ee dekedda Berbera ee DP world ayaa la sheegay inay Xukuumada Addis Ababa dooneyso inay mustaqbalka u noqoto dood ay u adeegsan karto awood militari inay ku gasho hadii ay u baahato deegaanada Somaliland iyo magaalada xeebta saaran ee Berbera.